Home Wararka RW Kheyre “Aanada aad maanta ka tegeysid ma leedahay awood aad isaga...
RW Kheyre “Aanada aad maanta ka tegeysid ma leedahay awood aad isaga difaacdid berri”
Guddiga loo magacaabay soo qiimaynta Hantida qaranka waa guddi ujeedka loo sameeyay uu yahay in lagu aargoosto, qaasatan RW. Kheyre oo u daneynaaya beeshiisa.
RW. Kheyre aya si joogta ah banneystay in uu sharciga waxa uu doono ka sameeyo, balse wuxuu illowsan yahay in uu xilka ka degi doono maalin aan dheereyn, waxaase in la xusuusiyo u baahan aanada uu ka tagaayo ma leeyahay awood uu berri isaga difaaco.
Ilaalinta hantida qaranka iyo tirakoobkeeda waa waajibaadka shaqo ee aay leedahay Wasaaradda Maaliyadda. Haddaba waxaa isweydiin mudan maxaa ka galay Wasaaradda Waxbarashada. Maxaas Abdullaahi Godax oo Soomali oo dhan aay taqaan dhaqankiisa loogu magacaabay guddoomiyaha Guddiga. Waa mid aan u baahneyn jawaabteeda in la raadiyo, sababta uu RW Kheyre u magacaabayna waa in uu ku bartilmaansado shaqsiyaad gaar ah.
Arrinta kale ee isweydiinta mudan waxay tahay Xeer ilaaliyaha iyo Hantidhowraha Guud ma qayb ka mid ah laanta Fulinta mise waa Hayado madaxbanaan sida dastuurka ku cad. Sida ku cad Dastuurka iyo nidaamka baarlamaaniga ah ee aan qaadannay waa hayado aan wax shaqo ah ku lahayn laanta fulinta. Raisul wasaare aan garanayn ama si ula kac ah sharciga ugu tumanaayo aya xafiiskiisa hoos keenay labadaas hay’adood oo uu sharciga qabo in ay ka madax bannaanaadaan fulinta.
Arrinta seddexaad waa arrinta guddig la magacaabay iyo conflict of interest ka dhashay halkaas.
Goodax waxaa hore loo siiyay guri dowladda leedahay. (Ma soo celin doona gurigaas?)
Wasiirka Maaliyadda waxaa ku maqan 42 Million oo doolar oo la diiday in wax la iska weydiiyo si shacabka u ogaadaan xadidda hantida qaranka
Wasiir Ducaale wuxuu dhul wayn oo ku yaala Garoonka Diyaaradaha ka ka dhistay hotel loo yaqaano Chelsea oo bishii aay ka soo gasho boqolaal kun. Sidoo kale wuxuu dhulkii shineema Misyooni ku dhegganaa ee reer Yassin Hagi ku haystaa xoog (Ma soo celin doonaa?)
Raisul wasaaraha isna rag badan oo ay xigto yihiin ayaa deggan dhulal badan oo dowladda leedahay oo isagu jira guryo aay dayactirteen iyo dhulal aay dhisteen. MOL waxay ka soo diyaarinaysaa arrintaan qoraal gaar ah.
Ugu dambyn arrimaha sidaan oo kala ah looma magacaabo siyaasiyiin ee waxaa loo magacaabaa dad dhexehexaad ah isla markaana farsama yaqaano ah.